अशोक दर्जीको जिम्मा लिएका टंक बुढाथोकीका दाई टिकाराम बुढाथोकीको असली कर्तुतको पर्दाफास, अशोकलाई प्रयोग गरेर मालामाल हुने मास्टर प्लान ! बुढाथोकी र बेथेल एकेडेमीका प्रिन्सिपल दिपक न्यौपाने बीच भएको गोप्य टेलीफोन वार्तालापको अडियो सार्बजनिक (अडियो सहित) « Sajhapage24
अशोक दर्जीको जिम्मा लिएका टंक बुढाथोकीका दाई टिकाराम बुढाथोकीको असली कर्तुतको पर्दाफास, अशोकलाई प्रयोग गरेर मालामाल हुने मास्टर प्लान ! बुढाथोकी र बेथेल एकेडेमीका प्रिन्सिपल दिपक न्यौपाने बीच भएको गोप्य टेलीफोन वार्तालापको अडियो सार्बजनिक (अडियो सहित)
काठमाडौँ । हिजो आज निक्कै चर्चामा रहेका बाल गायक अशोक दर्जीको बिषयलाई लिएर विभिन्न प्रकारका बिबादहरु भइरहेका छन । सामाजिक संजाल र मिडियामा आएको केहि नकारात्मक अभिव्यक्तिहरुलाई लिएर टंक बुढाथोकीका दाई टिकाराम बुढाथोकी आक्रोशित मुद्रामा मिडियामा आई सबैलाई चुप लगाएका थिए । हुन पनि उनको कुरा सहि नै थियो । तर आज उनको असली कर्तुतको पर्दाफास भएको छ । यो भन्दा अगाडी सामाजिक संजालमा यदाकदा जे आलोचना भएको देख्न पाइन्थ्यो त्यो साचो सावित भएको छ । गर्नेको खुट्टा तान्नु हुन्न भन्नेहरु गलत सावित भएका छन आज सार्बजनिक भएको एक टेलिफोन वार्तालापले ।
उनै टिकाराम बुढाथोकी र अशोक दर्जीलाई १० कक्षा सम्म निशुल्क पढाई दिने उर्लाबारी स्थित बेथेल एडुकेशन एकेडेमीका प्रिन्सिपल दिपक न्यौपाने बीच भएको टेलिफोन सम्बाद आज सार्बजनिक भएको छ । सुरुमा फेसबुक मार्फत लिक भएको यो टेलिफोन सम्बादको अडियो विस्तारै भाइरल भएको छ । उक्त वार्तालापमा टिकाराम बुढाथोकीले अशोक दर्जीको प्रयोग गरेर आफु पनि मालामाल हुने भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिएका छन । उनले न्यौपानेलाई भनेका छन – ‘जसले मह काट्छ उसले हात चाड्छ’ । करिब २० मिनेट लामो अडियोमा टिकाराम बुढाथोकीले प्रिन्सिपल न्यौपानेलाई फकाई रहेको भन्ने कुरा स्पष्ट बुझिन्छ, स्कुल भन्दा पनि विदेश भ्रमण महत्वपूर्ण हो भनेर सम्झाएको बुझिन्छ । प्रिन्सिपल न्यौपाने भन्छन – ‘म अलि अप्ठेरोमा परे के पो गर्ने होला?’ – उता बाट जवाफ आउछ ‘तपाई चिन्ता नलिनुस ढुक्क हुनुस, बियर पिएर मज्जाले सुत्नुस, म सब मिलाउछु ।’
यो अडियो सुने पछी अशोक दर्जी र टंक बुढाथोकीका फ्यानहरुलाई निक्कै गाह्रो महसुस भएको छ । प्राय मानिसले टंक बुढाथोकीलाई अशोक दर्जीको लागी भगवान सरह मान्ने गर्छन । निस्वार्थ भावले सेवा गेरको ठान्दछन । तर त्यो अहिले आएर गलत सावित हुन पुगेको छ । यसभित्र बुढाथोकीको स्वार्थ लुकेको भन्ने कुराको पर्दाफास भएको छ । हुन त सडकमा ५-१० रुपैयाको लागी गित गाउने बालक अहिले देश विदेश भ्रमण गर्ने भएका छन । त्यसको श्रेय टंक बुढाथोकीलाई नै जान्छ तर टिकाराम बुढाथोकीको असली रुप बाहिरिए पछी सबै अचम्ममा परेका छन ।
सार्बजनिक भएको बेथेल एडुकेशन एकेडेमीका प्रिन्सिपल दिपक न्यौपाने र टंक बुढाथोकीका दाई टिकाराम बुढाथोकीका बीच भएको टेलिफोन वार्तालापको अडियो सुन्नुहोस :
फोन वार्तालापको अडियो सार्बजनिक भएपछी दिपक न्यौपानेले पत्रकार सम्मेलन गरी स्पष्टिकरण दिएका छन । उक्त पत्रकार सम्मेलनको भिडियो हेर्नुहोस :